သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများအတွက်အကောင်းဆုံးသောလိုင်းများရွေးချယ်နည်း Martech Zone
ကြာသပတေးနေ့, သြဂုတ်လ 29, 2019 သောကြာနေ့, သြဂုတ်လ 30, 2019 Ashwini Dave
စီးပွားရေးဆိုင်ရာအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ၊ အွန်လိုင်းသုံးသပ်ချက်များနှင့်လူမှုမီဒီယာများပေါ်ပေါက်လာသည်နှင့်အမျှသင်၏ကုမ္ပဏီ၏ဖောက်သည်များ၏ပံ့ပိုးမှုကြိုးပမ်းမှုသည်သင်၏အမှတ်တံဆိပ်၏ဂုဏ်သိက္ခာနှင့်အွန်လိုင်းဖောက်သည်များ၏အတွေ့အကြုံတို့အတွက်အဓိကကျသည်။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင်သင့်ရဲ့ပံ့ပိုးမှုနဲ့အတွေ့အကြုံတွေမရှိရင်သင်၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကြိုးပမ်းမှုသည်မည်မျှကြီးမားသည်ကိုအရေးမကြီးပါ။
ကုမ္ပဏီတစ်ခုအတွက်အမှတ်တံဆိပ်သည်လူတစ် ဦး ၏နာမည်နှင့်တူသည်။ သင်သည်ခက်ခဲသောအရာများကိုကောင်းစွာလုပ်ဆောင်ရန်ကြိုးစားခြင်းအားဖြင့်သင်ဂုဏ်သတင်းရရှိသည်။
သင်၏ဖောက်သည်များနှင့်သင်၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်သည် loggerheads တစ်ခုနှင့်တစ်ခုအမြဲတမ်းအမြဲတမ်းရှိနေသလား။
အခမဲ့ (နှင့်အလွန်အကုန်အကျများသော) အခမဲ့ပေးဆပ်မှုနှင့်သစ္စာရှိမှုအစီအစဉ်များအားလုံးကြားမှသင်တစ်ခါတစ်ရံတွင်ဖယ်ထုတ်ပစ်လိုက်သည်။
ဤအရာအလုံးစုံတို့၏အဖြေများက“ ဟုတ်ကဲ့” ဆိုပါကပုံဆွဲဘုတ်သို့ပြန်သွားပြီးသင်၏ပြန်လည်လည်ပတ်မှုကိုရမည် ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုမဟာဗျူဟာ။ သင့်အားလမ်းပြရန်“ How” မတိုင်မီ“ ဘာကြောင့်” ကိုနားလည်ပြီးသင့်ဖောက်သည်များအမှောင်ထုပေါ်သို့ကူးသွားစေသည့်အရာများကိုကြည့်ကြစို့။ ယုတ္တိတန်သည်ဟုဆိုရမည့်ဖြစ်နိုင်ခြေနှစ်ခုကိုဖော်ပြပါ။
တန်ပြန်ထိုးထွင်းသိမြင်နိုင်သကဲ့သို့ဖောက်သည် ၀ န်ဆောင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍“ အလွန်အကျွံ” လုပ်ခြင်းကဲ့သို့သောအရာတစ်ခုရှိသည်။ ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုအမြဲတမ်းအမြစ်တွယ်နေခြင်းသည်“ လက်တွေ့ကျ” သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ရုပ်သံလိုင်းတိုင်းတွင်ထောက်ပံ့မှုပေးရန်ကမ်းလှမ်းရန်မဖြစ်နိုင်ကြောင်း၊ လူ့အရင်းအနှီးမလုံလောက်ခြင်းနှင့်အလွန်အကျွံကုန်ကျစရိတ်များသည်ဤအတွက်အဓိကအကြောင်းပြချက်ဖြစ်သည်။ သင်သည်သင်၏ဖောက်သည်များအတွက်အဓိပ္ပါယ်ရှိသည့်မှန်ကန်သောလမ်းကြောင်းများကိုရွေးချယ်ပါကပိုမိုကောင်းမွန်ကြောင်းယုတ္တိဗေဒကဖော်ပြသည်။
အကယ်၍ သင်လိုအပ်လျှင်၊ သင့်အတွက်အလုပ်မလုပ်သောချန်နယ်တခုကိုပြန်လှည့်ပါ။ ဒါပေမယ့်အရေးအကြီးဆုံးကတော့လျောက်ပတ်စွာလုပ်ပါ။ လျောက်ပတ်သောဖြစ်ခြင်းအဆိုပါစစ်ဆင်ရေးစကားလုံး။ သင့်ဖောက်သည်များအနေဖြင့်ဒေါသနှင့်မကျေနပ်မှုများမဖြစ်လာစေရန်သေချာစေရန်သင်ပြုလုပ်နိုင်သည့်အဆင့်များစာရင်း (ဒီမှာရုတ်တရက်နှင့်မလွှဲမရှောင်ပြောင်းလဲမှုများဖြစ်ပေါ်လာခြင်း) -
သင်၏အထဲသို့ဝင်ပါ ဖောက်သည်ရဲ့အတွေးအခေါ် သူတို့ရင်ဆိုင်ရနိုင်သည့်စိန်ခေါ်မှုများ / စိတ်ပျက်စရာများကိုကြိုတင်ကာကွယ်ရန်။ ပိုမိုစာနာသောလမ်းကြောင်းကိုလက်ခံခြင်းအားဖြင့်သင်သည်သူတို့၏နာကျင်မှုကိုသက်သာစေပြီးသူတို့၏စိုးရိမ်မှုများကိုထိထိရောက်ရောက်ဖြေရှင်းနိုင်သည်။
အကောင်အထည်ဖော်ပါ အဆင့်ဆင့်မှတဆင့်အပြောင်းအလဲများ တစ်ချိန်တည်းမှာအားလုံး tools တွေကိုဖယ်ရှားပစ်၏။ ထိုသို့ပြုလုပ်ရန်နည်းတစ်နည်းမှာအခြားအထောက်အပံ့ရွေးစရာများကိုကမ်းလှမ်းခြင်းနှင့်ဖောက်သည်များ၏မည်သည့်အထောက်အပံ့ကိုမဆိုမဖယ်ရှားမီ၎င်းကိုစင်မြင့်ပေါ်တွင်မီးမောင်းထိုးပြခြင်းဖြစ်သည်။
ပိုမိုရွေးချယ်ပါ ဖန်တီးမှုနှင့်ကိုယ်ပိုင်ဖောက်သည်ထောက်ခံမှုရွေးချယ်စရာ တစ်ချိန်ကလိုင်းများပိတ်ထားခဲ့ကြသည်။ ပညာရေးလမ်းညွှန်များသည်ဖောက်သည်များအားလက်ဖြင့်ကိုင်တွယ်ရန်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်ပြီး၎င်းတို့အတွက်ရရှိနိုင်သည့်ရွေးချယ်စရာအားလုံးကိုထုတ်ဖော်ထားသည်။
နောက်ထပ်တစ်ခုချမှတ်ပါ ဆက်သွယ်ရေး၏တိုက်ရိုက်နှင့်ရိုးသားစတိုင် ဖောက်သည်များကိုသူတို့ရရှိနိုင်သောရရှိနိုင်သည့်ထောက်ပံ့မှုလိုင်းများအကြောင်းပညာပေးရန်လာသောအခါ။ ဥပမာ Kinsta အမှတ်တံဆိပ်သည်၎င်းတို့၏ဖောက်သည်များလက်ဆင့်ကမ်းပေးသောအရာများ။
အထောက်အကူပြုအလုပ်သည်သတိထားအာရုံစိုက်ရန်နှင့်စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်လိုအပ်လေ့ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အင်ဂျင်နီယာများအနေဖြင့်သင်၏ပံ့ပိုးမှုဆိုင်ရာစိုးရိမ်ပူပန်မှုများကိုအနည်းဆုံးသောစိတ်ပျံ့လွင့်စရာများနှင့်ကြားဖြတ်နှောင့်ယှက်မှုများကိုဖြေရှင်းနိုင်ရန်သူတို့၏အင်အားအားလုံးကိုအာရုံစိုက်နိုင်သည့်အတွက်သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်ကိုမြန်ဆန်စွာနှင့်ပိုမိုထိရောက်သောနည်းလမ်းဖြင့်ဖြေရှင်းရန်ပိုမိုကောင်းမွန်သောကူညီမှုကိုကျွန်ုပ်တို့အားခွင့်ပြုသည်။ ၎င်းကသင်၏ထောက်ခံမှုတောင်းဆိုမှုများသည်နောက်ဆုံးတွင်ပိုမိုမြန်ဆန်စွာဖြေရှင်းနိုင်သည်ဟုဆိုလိုသည်။
စဉ်းစားကြည့်ပါ ခရီးအဖြစ်ဖောက်သည်ထောက်ခံမှု ပံ့ပိုးမှုစနစ်သို့ပြောင်းလဲမှုများအကြောင်းဖောက်သည်များအားအသိပေးသည့်သော့ခတ်အချက်များကိုဖော်ထုတ်ပါ။ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများအနေဖြင့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာအထောက်အပံ့နှင့်ဆက်နွယ်သောသို့မဟုတ်အသစ်သောကုန်ပစ္စည်းအသစ်များကိုရှာဖွေနိုင်သည့်လူထုဖိုရမ်သို့ပြန်လည်နေရာချထားခြင်းကဲ့သို့သောဥပမာများပါဝင်သည်။
အဓိကထုတ်ယူမှု - သုံးစွဲသူဝန်ဆောင်မှုအတွေ့အကြုံကိုပေးသောကိရိယာများကိုအသုံးပြုသောအခါ“ ပိုမိုကောင်းမွန်သည်” ဟူသောစကားပုံသည်အမြဲတမ်းပိုကောင်းမည်မဟုတ်ပါ။ တစ်ခါတစ်ရံတွင် ပို၍ နည်းသောအာရုံစူးစိုက်နိုင်သည့်ရွေးချယ်မှုများကအလုပ်ကိုပိုမိုမြန်ဆန်စေပါသည်။ ထို့အပြင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနှင့်ထိရောက်သောဆက်သွယ်ရေးနည်းလမ်းဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောပြောင်းလဲမှုများကိုသင့်ဖောက်သည်များအားလမ်းညွှန်ခြင်းနှင့်အခြားပံ့ပိုးမှုရွေးချယ်စရာများကိုလမ်းညွှန်ပေးခြင်းသည်အဓိပ္ပာယ်ရှိသည်။
ဖြစ်ရပ် (၂) သင်သည်“ လုံလောက်သော”“ BAD” ဖောက်သည်များ၏ပံ့ပိုးမှုအတွေ့အကြုံအပေါ်အာရုံမစိုက်ပါ။
ဖောက်သည်များသည်မကြာခဏဆိုသလိုကုမ္ပဏီ၏ထူးခြားသောကမ်းလှမ်းမှုများ၊ အပြိုင်အဆိုင်စျေးနှုန်း၊ အဆင်ပြေလွယ်ကူမှုနှင့်အရည်အသွေးရှိသောကုန်ပစ္စည်းများအတွက်ချစ်ကြသည်။ “ ဖောက်သည်ကောင်းသောအတွေ့အကြုံ” သည်အမှတ်တံဆိပ်ခထက်အမှတ်တံဆိပ် A ကိုအဘယ်ကြောင့်ပိုမိုကြိုက်နှစ်သက်ရသည့်အကြောင်းရင်းများစာရင်းတွင်အလွန်ရှားပါးသည်။
သို့သော်စိတ်ဝင်စားစရာမှာ၊ မကောင်းတဲ့ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှု မကြာခဏဖောက်သည်တစ် ဦး အမှတ်တံဆိပ်နှင့်အတူဆက်ဆံခြင်းကိုရပ်တန့်အဘယ်ကြောင့်အဓိကအကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ စိတ်ထဲပေါ်လာတဲ့ဥပမာအချို့:
ဖောက်သည် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူထံမှဖုန်းပေါ်တွင်အဆုံးသတ်မကြာသောဤရှည်လျားသောစီတန်းမှုများ။
စာရင်းသည်ဆက်လက်တည်ရှိသည်။ ဤဥပမာအားလုံးသည်ချက်ချင်း ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်ရန်လိုသည့်ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသောဖောက်သည်အတွေ့အကြုံကိုဖြစ်စေသည်ဟုပြောစရာမလိုပါ။
အမှန်မှာ၊ Customer ဆက်သွယ်မှုကောင်စီမှပြုလုပ်သောလေ့လာမှုတစ်ခုသည်ကုမ္ပဏီ၏ဖောက်သည်မဟာဗျူဟာ၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သင့်သောစိတ်ဝင်စားဖွယ်အသေးစိတ်အချက်နှစ်ချက်ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။
ဤထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုတမင်တကာပြုခြင်းသည်ဖောက်သည်များ၏ ၀ န်ဆောင်မှုကိုတိုးတက်စေရန်၊ ဖောက်သည်များ၏ ၀ န်ဆောင်မှုကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချရန်နှင့်ဖောက်သည်များ၏ကျဆင်းမှုကိုလျော့နည်းစေနိုင်သည်။
အဓိကထုတ်ယူမှု - ဖောက်သည်များသည် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသောကုမ္ပဏီများထက်ပိုမိုကောင်းမွန်သော ၀ န်ဆောင်မှုများကြောင့်လက်စားချေလိုကြသည်။ သင်၏အမှတ်တံဆိပ်သည်၎င်း၏ခြေထောက်ကိုမစဉ်းစားဘဲအမြဲတမ်းတိုးပွားလာသောဖောက်သည်များ၏တိုင်ကြားမှုများ၏နောက်ကျောမှတ်တမ်းကိုမလျှော့ချပါကယုန်တွင်းကျလိမ့်မည်။
“ သုံးစွဲသူ ဦး စားပေး” ချဉ်းကပ်မှုကိုလက်ခံသောအခါစဉ်းစားရမည့်အဓိကမေးခွန်းများ
သင်၏ဖောက်သည်များအားကူညီခြင်းနှင့်ထောက်ထားစာနာခြင်းစသည့်ကိစ္စများနှင့် ပတ်သက်၍ မေးမြန်းခြင်းနှင့်စုံစမ်းရန်လိုအပ်သောအရေးကြီးသောမေးခွန်းအချို့ရှိပါသည်။
ကွဲပြားခြားနားသောလူ ဦး ရေစာရင်း၏ ဦး စားပေးစာရင်းများကိုသင်စာရင်းပြုစုနိုင်ပါသလား။
၀ ယ်သူ၏အမြင်အရတုံ့ပြန်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍“ အရေးတကြီး” သည်မည်မျှအရေးတကြီးဖြစ်သနည်း။ ၁၀ စက္ကန့်၊ ၅ မိနစ်၊ တစ်နာရီဒါမှမဟုတ်တစ်ရက်လား။
စုံစမ်းမှု / စိုးရိမ်ပူပန်မှုအမျိုးအစားကိုမည်သည့်နည်းလမ်းဖြင့်အသုံးပြုသင့်သနည်း။ အခြေခံအားဖြင့်၎င်းသည်ဖုန်းအထောက်အပံ့လိုအပ်သောပြonlineနာများနှင့်အွန်လိုင်းတွင်ဖြေရှင်းနိုင်သည့်ကိစ္စရပ်များကိုခွဲခြားရန်လိုအပ်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်ငွေကြေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များသည်ပိုမိုမြန်ဆန်။ ထိရောက်သော resolution အတွက်ဖုန်းအထောက်အပံ့လိုအပ်သည်။
ရှုပ်ထွေး? ဥပမာတစ်ခုကြည့်ရအောင်။ ဆိုလိုတာကဖောက်သည်တွေကဖုန်းအကူအညီတောင်းခံနေပေမဲ့သူတို့တကယ်လိုချင်တာကမြန်မြန်ဆန်ဆန်တုန့်ပြန်မှုပဲ။ ထို့ကြောင့်သင်၏အထောက်အကူပြုအဖွဲ့သည်ဖောက်သည်တစ် ဦး ၏မေးမြန်းမှုကိုချက်ချင်းဖြေရှင်းရန်ကူညီနိုင်သည့်လေ့ကျင့်မှုခံယူရန်သင့်တော်သည်။
ထိပ်တန်းဖောက်သည်အထောက်အကူပြုကိရိယာများ၏ကောင်းကျိုးနှင့်ဆိုးကျိုးများ - အမြန်လမ်းညွှန်
ဖောက်သည်များ၏ ၀ န်ဆောင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ကုမ္ပဏီအမျိုးမျိုးသည်မဟာဗျူဟာအမျိုးမျိုးကိုရွေးချယ်ကြသည်မှာသံသယဖြစ်စရာမလိုပါ။ သူတို့၏လိုအပ်ချက်များ၊ သုံးစွဲသူများ၏မျှော်လင့်ချက်များ၊ ထို့အပြင်ယနေ့ရွေးချယ်စရာများစွာပါသောကြောင့်အနည်းဆုံးပြောရလျှင်ရှုပ်ထွေးပြီးလွှမ်းမိုးနိုင်သည်။ သင့်အတွက်ပိုမိုလွယ်ကူစေရန်၊ ယနေ့သုံးစွဲသူများ၏အဓိကပံ့ပိုးမှုလမ်းကြောင်း ၄ ခုအတွက်ထိပ်တန်းအပြစ်များနှင့်ဆိုးကျိုးများကိုကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြခဲ့သည်။
အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံရရန်အတွက်“ မှန်ကန်သောခေါ်ဆိုခြင်း” လား။
၎င်းသည်ဖောက်သည်တစ် ဦး ၏စိုးရိမ်ပူပန်မှုများနှင့်စိတ်ခံစားမှုများကိုချက်ချင်းတိကျစွာဖြေရှင်းပေးသည်။
ဖောက်သည်များရင်ဆိုင်ရနိုင်သည့်ရှုပ်ထွေးပြီး ပို၍ အရေးတကြီးကိစ္စရပ်များကိုဂရုပြုရာတွင်ထိရောက်မှုရှိသည်။
၎င်းသည်“ ဟောင်းနွမ်းသောခေတ်” သို့မဟုတ်အထူးသဖြင့်မျိုးဆက်သစ်များအတွက်စကားပြောခြင်းထက်စာပို့ခြင်းကိုပိုနှစ်သက်သောကြောင့်ခေတ်နောက်ကျသွားနိုင်သည်။
အကယ်၍ ဖောက်သည်များကပိုမိုကြာရှည်သောအချိန်ကိုစောင့်ရန်အဆုံးသတ်ပါက၎င်းသည်အလွန်အမင်းဖိအားပေးမှုနှင့်စိတ်ပျက်စရာများကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ အေးဂျင့်များအလုပ်များနေလျှင်သို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီတွင် ၀ န်ထမ်းများနည်းနေပါကထိုသို့ဖြစ်လေ့ရှိသည်။
“ Chatty” ဖြစ်ခြင်းသည်ကောင်းသည်ထက်မကောင်းမှုကိုပိုလုပ်နိုင်သလား။
၎င်းသည်ချက်ချင်းနှင့်ထိရောက်သော query resolution ကိုပေးသည်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင်ဖြစ်သည် ၉၂% အထိမြင့်မား ဖောက်သည်များအကြား!
၎င်းသည် agent / bot များအားလူအများနှင့်တစ်ပြိုင်တည်းစကားပြောဆိုရန်အခွင့်အာဏာပေးသည်။ တကယ်တော့ CallCentreHelper ရဲ့အချက်အလက်များအရ“အေးဂျင့်များ၏ 70% တစ်ပြိုင်နက်တည်းစကားပြောဆိုမှု ၂-၃ ခုကိုကိုင်တွယ်နိုင်ပြီး ၂၂% သောထောက်ခံမှုကိုယ်စားလှယ်များသည်တစ်ကြိမ်လျှင် ၄-၅ စကားပြောဆိုမှုကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။ ”
၎င်းသည်ကုမ္ပဏီများအား ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအလိုအလျောက်ဖြစ်စေရန်နှင့် chatbot နှင့်ပူးတွဲ browsing စသည့်အနာဂတ်လုပ်ဆောင်မှုများကိုပေါင်းစပ်ခြင်းအားဖြင့်ပိုမိုလမ်းညွှန်မှုအတွေ့အကြုံကိုပေးသည်။
၎င်းသည်စားသုံးသူအတွက်သာမကဖောက်သည်ကိုယ်စားလှယ်အတွက်အနာဂတ်အတွက်အသုံးဝင်သောရည်ညွှန်းချက်ဖြစ်သည့် (မကြာခဏ dashboard မှတစ်ဆင့်) စကားပြောဆိုမှုကိုခြေရာခံနိုင်သည့်စွမ်းရည်ကိုပေးထားသည်။
၎င်းသည်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များကိုအားဖြည့်ပေးသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အသုံးပြုသူများဝယ်ယူသည့်အပြုအမူ၊ အတိတ်ကတိုင်ကြားမှုများ၊ ဝယ်သူများ၏လှုံ့ဆော်မှုနှင့်မျှော်လင့်ချက်များစသည့်တန်ဖိုးရှိသောထိုးထွင်းသိမြင်မှုကို (တိုက်ရိုက်ချက်တင်ဆွေးနွေးပွဲများမှထုတ်ယူသည်) နှင့်၎င်းအားပိုမိုကောင်းမွန်သော ၀ န်ဆောင်မှု / ကမ်းလှမ်းမှုများပေးနိုင်ရန်အသုံးပြုနိုင်သည်။
chat support ကိုအသုံးပြုခြင်း၏ဆိုးကျိုးများ -
Kayako ၏အဆိုအရ၊ scripted response များသည်သင့်ဖောက်သည်များအားစက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်ဖြစ်သည်။ စားသုံးသူ ၂၉ ရာခိုင်နှုန်းက scripted response များသည်စိတ်ရှုပ်စရာအကောင်းဆုံးဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုပြီးစီးပွားရေး ၃၈ ရာခိုင်နှုန်းကသဘောတူသည်။
အကယ်၍ chatbot သည်ဖောက်သည်၏စိုးရိမ်မှုကိုဖြေရှင်းရန်မဖြစ်နိုင်ပါကအသုံးပြုသူအားအေးဂျင့်တစ်ခုသို့လမ်းကြောင်းပြောင်းရန်လိုအပ်လျှင်ပြissuesနာများကို မကျေနပ်၍ ဖြေရှင်းနိုင်လိမ့်မည်။ သဘာဝကျကျ, ကအချိန်ပိုမိုယူပြီးအဆုံးသတ်နှင့် disgruntled ဖောက်သည်စေပါတယ်။
မင်းသိလား? MarketingDive မှအချက်အလက်များအရ ၅၅ နှစ်ကျော်သူများသည်အခြားပလက်ဖောင်းများမှတယ်လီဖုန်းအထောက်အပံ့ကိုရည်ညွှန်းသည်။
မေးလ်သည်ဆက်သွယ်ရေးအလယ်အလတ်သစ်ဖြစ်သည် - သို့မဟုတ်လား။
၎င်းသည်အသုံးအများဆုံးဆက်သွယ်ရေးပုံစံတစ်ခုဖြစ်သည်။ တကယ်တော့, ဒေတာကလူပေးပို့ကြောင်းအကြံပြုထားသည် 269 ဘီလီယံအထိ နေ့စဉ်အီးမေးလ်များ။
၎င်းသည်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များကိုတစ်နေ့လျှင် ၃၆၅ ရက်၊ နေ့ဖြစ်စေ၊ နေ့ဖြစ်စေမေးမြန်းရန်ပို့ဆောင်သည်။
၎င်းသည်အနာဂတ်ရည်ညွှန်းချက်အတွက် (ပိုမိုကောင်းမွန်သောအသုံးအနှုန်းမရှိခြင်းအတွက်) မိမိဆန္ဒအလျောက်စာဖြင့်ရေးသားထားသောအထောက်အထားများကိုပေးထားသည်။
chat bot စက်များ အသုံးပြု၍ အလားတူမေးမြန်းစုံစမ်းမှုများကိုအလိုအလျောက်ပြုလုပ်ရန်အခွင့်အလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဒါဟာအတင်းအကျပ်အမှားများကို ဦး ဆောင်လမ်းပြပေးနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ဤအမေဇုံအီးမေးလ်ကိုကလေးမမျှော်လင့်ဘဲမွေးဖွားခြင်းပြissuesနာများရှိသူများထံသို့ပေးပို့ခဲ့သည်။ သင်စိတ်ကူးကြည့်နိုင်သကဲ့သို့လူထုဒေါသသည်အထွတ်အထိပ်သို့ရောက်ခဲ့သည်။ အလိုအလျောက်အီးမေးလ်စာရင်းပေးသွင်းထားသူစာရင်းတိုင်းကိုစစ်ဆေးခြင်းသည်ထိုကဲ့သို့သောမှားယွင်းမှုများကိုရှောင်ရှားရန်မဖြစ်မနေလိုအပ်သည်။
အီးမေးလ်များကိုတုန့်ပြန်ရန်ပိုမိုကြာသောကြောင့်၎င်းသည်ချက်ချင်းမေးမြန်းသော resolution ကိုမပေးပါ။ Forrester သုတေသနမှပြောကြားသည်မှာစားသုံးသူ ၄၁ ရာခိုင်နှုန်းသည် ၆ နာရီအတွင်းအီးမေးလ်တုံ့ပြန်မှုကိုမျှော်လင့်ကြောင်း၎င်းကပြောကြားခဲ့သည်။
၎င်းသည်အသုံးပြုသူ၏စိတ်ကိုဖတ်နိုင်ခြင်းနှင့်မျဉ်းကြောင်းများအကြားဖတ်နိုင်ခြင်းစသည့်အထူးကျွမ်းကျင်မှုများစွာလိုအပ်သည်။ အဆိုပါဆက်သွယ်ရေးကိုပိုမိုသွယ်ဝိုက်ဖြစ်ပြီးရှုပ်ထွေးရနိုင်သည်။ ယေဘူယျအားဖြင့်ဆက်သွယ်မှုအခြေအနေသည်အီးမေးလ်ဖလှယ်မှုအကြားတွင်အလွယ်တကူပျောက်ဆုံးသွားနိုင်သည်။
အွန်လိုင်းလူမှုရေးရောက်ရှိခြင်းသည် Boon သို့မဟုတ် Bane လား။
၎င်းသည်ကုမ္ပဏီများသည်အသုံးပြုသူ၏စိုးရိမ်မှုများကို post မှတ်ချက်များ၊ ပုဂ္ဂလိက / တိုက်ရိုက်စကားပြောခြင်းနှင့်အဖွဲ့လိုက်မက်ဆေ့ခ်ျများဖြေရှင်းနိုင်သည့်နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးကိုပေးသည်။ ၎င်းသည်စျေးကွက်သုတေသနပြုလုပ်ရန်နှင့်သင်၏အသုံးပြုသူအားပိုမိုနားလည်ရန်ကူညီသည်။
သဘာ ၀ အရလူသိရှင်ကြားဖြစ်ခြင်းကြောင့်သုံးစွဲသူများသည်ယခင်ရှိခဲ့ဖူးသည့်အတိုင်းသူတို့၌ရှိကောင်းရှိနိုင်သည့်မေးမြန်းချက်များ၏အဖြေများကိုရရှိရန်ကူညီသည်။ အမှတ်တံဆိပ်များသည်စိတ်သဘောထားတူသူများနှင့်အတူတကွပေါင်းစပ်ပြီးသူတို့၏မေးခွန်းများ / စိုးရိမ်မှုများကိုဖြေရှင်းရန်ကူညီပေးသည့်ရပ်ရွာဖိုရမ်တစ်ခုကိုဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။
၎င်းသည်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များအတွက်ကောင်းမွန်သောအတွေ့အကြုံများကိုစားသုံးသူများမှသုံးစွဲသူ၏ယုံကြည်မှုကိုရရှိရန်အလွန်ကောင်းသောအခွင့်အလမ်းတစ်ခုအဖြစ်ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။ အမှတ်တံဆိပ်သည်ဟာသဉာဏ်ကိုသုံးပြီးအသုံးပြုသူ၏ပြသနာများကိုဖြေရှင်းရာတွင်ပိုမိုတီထွင်ဖန်တီးနိုင်သည်။ Skyscanner သည်ယင်းကိုအထက်တွင်ပြထားသောဥပမာတွင်ပြောင်ပြောင်တင်းတင်းဖော်ပြသည်။
၎င်းသည်ကုမ္ပဏီ၏လူမှုမီဒီယာတွင်တက်ကြွစွာလုပ်ဆောင်ခြင်းသည်ပြောင်းလဲရန်နှင့်ပြောင်းလဲနေသောအချိန်နှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ရန်စွမ်းရည်ကိုပြသသည်။ MarketingDive မှခန့်မှန်းထားသည့်သုတေသနတစ်ခုအရကြီးမားသောအကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုမှာ“25 နှစ်အရွယ် ဖောက်သည် ၀ န်ဆောင်မှုအတွက်ဆက်သွယ်ရေးကိုသူတို့ ဦး စားပေးသည့်နည်းလမ်းအဖြစ်လူမှုမီဒီယာကိုအဓိကရွေးချယ်ခဲ့သည်။
Facebook, Twitter စသည့်အများသုံးဒိုမိန်းများတွင်မကောင်းသောပို့စ်များကိုများများမြင်တွေ့ရပါကကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏ပုံရိပ်ကိုယိုယွင်းစေနိုင်သည်။
၎င်းသည်မလိုလားအပ်သောအပြုအမူများ (ဥပမာအနိုင်ကျင့်ခြင်းသို့မဟုတ်စော်ကားသောမှတ်ချက်များ) ကိုဖြစ်ပွားစေနိုင်ပြီးသတင်းအချက်အလက်ယိုစိမ့်ခြင်းသို့မဟုတ်တိုက်ခိုက်ခြင်းကဲ့သို့သောလုံခြုံရေးအန္တရာယ်များကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
ဖောက်သည်များ၏မျှော်လင့်ချက်များထက် ကျော်လွန်၍ ကိုယ်စားလှယ်များအားပြောခြင်းသည်ရှုပ်ထွေးမှု၊ အချိန်ကုန်မှုနှင့်ဖြုန်းတီးမှုနှင့်ကုန်ကျစရိတ်များကိုပေးဆပ်ရန်အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်သည်။
မှန်ကန်သောဖောက်သည်ဆက်သွယ်ရေးကိရိယာများရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်လာလျှင်အမှတ်တံဆိပ်များယူနိုင်သောမည်သည့်ပုံစံနှင့်မဆိုကိုက်ညီမှုမရှိပါ။ သုံးစွဲသူများ၏လိုအပ်ချက်များနှင့်သုံးစွဲသူများမျှော်လင့်ချက်များစသည့်ရရှိနိုင်သည့်အရင်းအမြစ်များ၊ ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းနှင့်အချိန်ကန့်သတ်ချက်များစသည့်အဓိကအချက်များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လိုအပ်သည်။
အသုံးပြုသူအတွက်ချောမွေ့စွာ၊ အခက်အခဲကင်းသော၊ ကိုယ်ပိုင်ပြုလုပ်ထားခြင်းနှင့်အပြုသဘောဆောင်သည့်ဖောက်သည်အတွေ့အကြုံများကိုပေးခြင်းအားဖြင့်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့်ဖောက်သည်များမှသည်ကုမ္ပဏီ၏ ၀ န်ထမ်းများနှင့်အထွေထွေအသိုင်းအဝိုင်းသို့သက်ဆိုင်သူအားလုံးအားအဓိပ္ပါယ်ရှိသောတန်ဖိုးများကိုပေးကမ်းခြင်းအားဖြင့်။
ဤအချက်အလက်များအားလုံးပါ ၀ င်သောကြောင့်ဟောပြောချက်ကိုလမ်းလျှောက်ရန်နှင့်ဖောက်သည်များအားတစ်ချိန်တည်းလုံးလုံးစိတ် ၀ င်စားစေရန်ပညာပေးသူဖောက်သည်၏အတွေ့အကြုံကိုပြောပြရန်အချိန်ဖြစ်သည်။ မင်းရောက်နေလား ငါတို့ထင်တယ်
Ashwini သည်စီးပွားရေး၊ စီးပွားစွမ်းဆောင်ရှင်၊ အီး - ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကိုစိတ်ထက်သန်သည်။ သူမနှင့်အလုပ်လုပ်နေသည် ရယူပါ ဒီဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကျွမ်းကျင်သူတစ်ယောက်အနေနဲ့ သူသည်လွတ်လပ်သောစိတ်ဝိညာဉ်ဖြစ်ပြီးစွန့်စားခန်းစွန့်စားသောပညာရှင်တစ် ဦး ဖြစ်ပြီးသူမအားသူမနှင့်အချိန်ဖြုန်းခြင်း၊ တစ်ချိန်ကချစ်ခြင်း၊ ဂီတအပြင်အားကစားကိုကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ကစားခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သူမသည်သမုဒ္ဒရာတွင်စွဲလမ်းနေပြီးဘဝကိုကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်အနုပညာလက်ရာများအဖြစ်ရှုမြင်သောကြောင့်အတွေ့အကြုံအသစ်များရရှိရန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသောခရီးသွားဖြစ်ခြင်းသည်လမ်းများပေါ်တွင်ဖြစ်သည်။
Subscription Video Service စတင်ရန်လမ်းညွှန်
ဒီဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဌာနတွင်မည်သည့်အခန်းကဏ္ Need များလိုအပ်သနည်း။